Koox walba wey ku jiraan xagjirradu - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
"´Ha la ammaan geliyo goobaha lagu cibaadeeysto". Sawirle: Lars Ekman/Sveriges Radio)
Koox walba wey ku jiraan xagjirradu
Dhan walba xag-jirka wuu ka jiraa
La daabacay tisdag 13 januari 2015 kl 15.10
Wixii ka dambeeyay dhacdadii argagixisada ee toddobaadkii tagay gilgishay dalka Faransiiska ayey ka dambeeyeen falal weerarro ah loo geeystey Masaajiddo badan ee ku yaala magaalada Baariis ee caasimadda dalka Faransiiska.
Xaaladdaasi mid la mid ah ayaa laga dareemeyaa dalka Iswiidhen, sida ku cad baaritaan xaqiijin oo ey sameeyeen culimo ka howl-gasha jaamicadda Göteborg. Halka uu dhanka kale ururka daladda ururrada muslimiintu ka digay iney kor u kici karaan neceeybka loo hayo muslimiinta, isla-markaana ku booriyey muslimiinta reer Iswiidhen taxadar:
- Muddooyinkii ugu dambeeyey ayey muuqanayeen falal lagu wax-yeeleeyneyo masaajidda iyo shakhsiyaadka muslimiinta, gaar ahaan hablaha muslimiinta ee xiran xijaabka. Waa mid aan waayo arag-nimo ku aragney, sida uu sheegay af-hayeenka ururka daladda ururrada muslimiinta ee dalkan Iswiidhen Mohammed Kharraki.
Caalinka lagu magacaabo Göran Larsson, oo jaamicadda Göteborg ka dhiga maadada culuunta diimmaha oo baaritaan xaqiijin ah horay ugu sameeyay falalka dembiyada ee lagula kaco goobaha lagu cibaadeeysto ayaa sheegay iney jiraan sababo welwel keeni kara, maadaama uu filayo in dhacdadii magaalada Baariis ka dhacday ay saameeyn karto naceeybka muslimiinta loo hayo:
- Kolka la eego waayo-arag-nimo iyo dhacdooyinkii horey loo soo marey ayey caddahay in falalka caalamka ka dhacaa ey saameeyn ku yeeshaan kuwa waddammada goonida uga dhaca, dalka Iswiidhenna kama marna middaa. Mana ahan wax lala yaabo ama dhici karin in heer kulka is-ka hor-imaadku uu cirka isku shareero. Iyo weliba in dhacdooyinku hor-seedaan marka ey ugu daran tahay weerarro.
Falalka dhibaatooyinka ee loo geeysto muslimiinta dalkan ku dhaqan ayey ka mid yihiin farriimmo handadaado loogu gudbiyo dhambaallada mail-ka, waxyeelooyin goobaha lagu cibaadeeysto iyo weerarro qaabeey-san. Waana falal kor u kaca kolka ey meel ka dhacaan dhacdooyin la mid ah falalkii argagaxismada ee ka dhacay magaalada Baariis, sida uu sheegay Göran Larsson.
Mahdi Warsame, guddoomiyaha ururka xarunta dhexe ee dhaqanka Geeska Afrika oo ka aasaasan magaalada Örebro, magaaladaasina oo ka mid ah magaalooyin ey dhallin-yaro soomaaliyeed ee reer Iswiidhen ahi uga socdaaleen waddammada Suuriya iyo Ciraaq sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen ururka xag-jirka ee ISIS. Mahdi Warsame ayaa dhowaantan saxaafadda u xaqiijiyay iney laba ka mid ah dhallin-yaradaasi soomaaliyeed ku geeriyoodeen waqooyiga dalka Ciraaq. Middaasina oo Mahdi Warsame sheegay iney ka soo gaareen farriimmo handadaad ah ee loogu soo gudbiyey aaladda internet-ka iyo telefoonkaba:
Mahdi Warsame ayaa dhanka kale sheegey in farriimmaha handadaadda ee loo diraa ey ka yimaadaan dhinacyo kala duwan. Haddey noqon lahaayeen islaamiyiinta xag-jirka ah. Garabyada Cunsuriyiinta iyo sidoo kale ajaaniib ka soo jeedda goobaha ey dhallin-yaradaasi u dagaalka tagto.
Dhammaan Mohammed Kharraki-ga ururka daladda ururrada muslimiinta iyo caalinka Göran Larsson ayaa qaba in xaaladda muslimiinta dalku ku sugan yihiin aaney cidina ku macaashayn. Isla-markaana loo baahan yahay in la helo dheeli-tir bulshada dhexdeeda ka jira ee la xiriira xoriyadda diimaha, xoriyadda qowlka iyo nidaamka dimoqoraadiga oo garoon ku wada ciyaari kara. Middaasina oo horay la isagaga dayey dalka Faransiiska in laga hir-geliyo, sida uu sheegay Göran Larsson:
- Baahida jirta waxay tahay in laga biyo qaato habka faransiisku iminka isku dayay oo la helo midow dhan looga soo wada-jeedo dilka iyo argagixisada iyo in la taabaco nidaamka dimoqoraadiyadda iyo qiimaha shakhsiga ee sinnaanta ku dhisan.